नबिलको नाफा तीन अर्ब ६२ करोड ! | NiD - News
नबिलको नाफा तीन अर्ब ६२ करोड !
मेनुका कार्की, अन्नपुर्ण पोष्ट, २७ श्रावण २०७४
नबिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १३ वटा बैंकमध्ये नबिल बैंकको नाफा सबैभन्दा बढी हो ।
कृषि विकास बैंकको नाफा पौने तीन अर्ब पुगेको छ । ग्लोबल आईएमईको नाफा पनि दुई अर्बभन्दा बढी छ । बाँकी १० बैंकको नाफा भने एक अर्बभन्दा माथि छ । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म १३ वटाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । लगानी बढाएका कारण नाफामा पनि सहयोग पुगेको बैंकहरूको भनाइ छ ।
अघिल्लो आवमा दुई अर्ब ८१ करोड नाफा कमाएको नबिल बैंकको नाफा २८ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेर गएको वर्ष तीन अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । कृषि विकास बैंकको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ३१ करोड तीन लाखले बढेर दुई अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । यस्तै ग्लोबल आईएमईले पनि यस वर्ष ४७ दशमलव ४५ प्रतिशतले नाफा बढाएर दुई अर्ब तीन करोड ८१ लाख पुर्‍याएको छ ।
गत आवमा १३ वटा वाणिज्य बैंकले २२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । यो नाफा अघिल्लो आव बैंकहरूले गरेको नाफाको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो । गत आवमा १३ वटा वाणिज्य बैंकले १६ अर्ब ९६ करोड ९८ लाख नाफा गरेका थिए । प्रभु एनएमबी, एनआईसी एसिया, प्राइम कमर्सियल, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र सिद्धार्थ बैंकको नाफा अघिल्लो वर्ष र गत वर्ष अर्बभन्दा बढी छ ।
कृषि विकास बैंकको नाफा पौने तीन अर्ब पुगेको छ । ग्लोबल आईएमईको नाफा पनि दुई अर्बभन्दा बढी छ । बाँकी १० बैंकको नाफा भने एक अर्बभन्दा माथि छ ।
गतवर्ष अर्ब नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा सानिमा, लक्ष्मी र सनराइज बैंक परे पनि अघिल्लो वर्ष उनीहरूको अर्बभन्दा मुनि थियो । बैंकहरूले नाफा बढाउँदै लगे पनि बढेको पुँजी र त्यस अनुपातमा नाफा कमाउन नसकेको नेपाल बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । ‘आकारमा नाफा बढेको छ । तर प्रतिसेयर आम्दानी बढ्न सकेको छैन,' उनले भने, ‘१० प्रतिशत नाफा बाँड्न अब सवा अर्ब कमाउनुपर्छ ।'
पहिला जस्तो २०/२२ प्रतिशत प्रतिसेयर आम्दानी बाँड्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । पुँजी वृद्धि भएकाले नाफा बढे पनि बैंकहरूले पहिलेकै अवस्थामा प्रतिसेयर आम्दानी बाँड्न नसक्ने भएका हुन् । चुक्ता पुँजी बढेको केही वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।